Himalaya Dainik » अमेरिकामा सविनसँग खुलेको वर्षाको प्रेम
अमेरिकामा सविनसँग खुलेको वर्षाको प्रेम
नायिका वर्षा सिवाकोटी दशैंको टिका थापेर अमेरिका उडेपछि कोरोनामा किन अमेरिका उडिन भनेर चर्चा भयो । उनी, अमेरिका पुगेको दुई साता भैसक्यो । अमेरिकामा रहेकी वर्षाले सामाजिक संजालमा घुमफिरको तस्वीर पोष्ट गरेको देख्न सकिन्छ ।
उनै, वर्षाले अमेरिकामा रहेका आफ्ना प्रेमी सविनजंग थापासँगको भेटघाटको तस्वीर पनि इन्स्टाग्राममा शेयर गरेकी छिन् । भेटघाटमा वर्षाको लागि सविनसँगले गीत गाएको देख्न सकिन्छ । वर्षाले सामाजिक संजालमा शेयर गरेको तस्वीरले उनीहरुको भेटघाट विशेष भएको वुझ्न सकिन्छ ।
वर्षाले आफू विशेष कामले अमेरिका आएको र सो समयमा सविनसँगसँग भेटघाट गरेको बताएकी छिन् । सविनसँग र वर्षाको चिनजान भएको डेढ बर्ष भयो । यस भन्दा अगाडि अमेरिका पुग्दा वर्षा र संजिवको प्रेमको खबर बाहिरिएको थियो ।
यी युवतीले किन गरिन् कुकुरसँग धुमधाम विबाह ?
आज ‘ऐश्वर्य गर्ल’ दीपिकाको जन्मदिन, कती बर्षकी भइन् उनी ?
आज कार्तिक २३ गते आइतवारको राशिफलः यी ६ राशिको लागि शुभ
आखिर के छ सन्नी लियोनको यो तस्विरमा ? लाखौँ समर्थक क्षणभरमा झुम्मिए !
छालामा किन आउँछ सेतो दुवी ? यसबाट यसरी बच्न सकिन्छ !
सामाजीक संजालमा निकै सुन्दर बनेर देखिन्छिन् लजालु अञ्जली (फोटो फिचर)
दैनिक एउटा ल्वाङ खानुहोस्, मिल्नेछ १० चमात्कारिक लाभ
स्याङ्जामा एकै दिन १४ महिलासहित १११ जना पक्राउ